Somali News 05.20.21 | KWIT
Somali News 05.20.21
By Halima Osman • May 20, 2021
Laga bilaabo saaka, ardayda, macallimiinta, iyo shaqaalaha Dugsiga Beesha ee Magaalada Sioux iyo guud ahaan gobolka looma baahna inay waji xirtaan. Tallaabadaas ayaa loo qaaday si loogu hoggaansamo sharci xalay ay meel mariyeen sharci dejinta Iowa saacadihii ugu dambeeyay ee kalfadhigii sanadkan. Subaxnimadii hore ee saakay, gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa saxiixay sharciga mamnuucaya waajibaadka maaskarada ee iskuulada Iowa.
Sharci dejinta Iowa waxay soo gabagabeeyeen fadhiga ku dhowaad seddex toddobaad ka dib sidii la filayay ka dib markii xildhibaanada Jamhuuriga ay dhameystireen wadaxaajoodka ku saabsan qorshe canshuur adag.
Ansixinta isbeddelka canshuuraha, sharci-dajiyayaashu waxay ku darsadeen dhowr ahmiyadood oo kale oo muxaafid ah oo ay soo mareen, oo ka bilaabmaya xaddidaadda xuquuqda codbixinta illaa ballaarinta helitaanka qoryaha, iyo isbeddelka maaskaro xiran.
Tirakoobka daraasad bille ah oo dhawaan lasii daayay oo ku saabsan bankiyeyaasha meelaha miyiga ah ee 10 Meelood iyo gobollada Galbeedka, oo ay ku jiraan dhammaan saddexda gobol ee Siouxland, ayaa gaadhay rikoor cusub, laba bilood uun ka dib markii ay garaacday rikoodhkeedii hore. Isugeynta guud ee sahanka reer miyiga ee bisha May waxay gaadhay 78.8 - kudhowaad 7 dhibcood oo ka sareeya rikoodhkii hore. Dhibco kasta oo ka sarreysa 50 waxay muujineysaa dhaqaale koraya.
In ka badan 1,000 sanduuq oo cunto ah ayaa loo qaybiyay barnaamijka USDA ee "Barnaamijka Sanduuqa Cuntada ee Beeraleyda ilaa Qoysaska" saaka. Dadaalka waxaa soo qabanqaabiyey Wakaaladda Waxqabadka Bulshada iyo Xarunta Rajada. Waddo bixin kale oo loo maro dariiqa ayaa loo qorsheeyay 10ka subaxnimo Khamiista soo socota meesha baabuurta la dhigto ee Sunnybrook Church ee ku taal xaafadda Morningside ee Magaalada Sioux.
Somali News 05.19.21
By Halima Osman • May 19, 2021
Go'aanka korantada MidAmerican Energy ayaa saameyn ku yeeshay qeybaha Sioux City maanta. Afhayeenad uhadashay MidAmerican waxay sheegtay in maqnaanshuhu uu bilaabmay waqti 10: 53 am ah Qaar kamid ah macaamiisha 1,477 ayaa saameyn ku yeeshay. Macaamiilku waxay ahayd in awooda dib loousoo celiyo 2da duhurnimo .. Unity Point Health-St. Lukes wuxuu ka mid ahaa macaamiisha ugu waaweyn ee saameyn ku yeeshay maqnaanshaha.